Ukukhanya kwezibane, ukuKhanya kwezibane, ukuKhanya kwezibane, ukuKhanya kweziTyalo - u-Archibald
Wamkelekile kwizibane ezikhulayo ze-LED
I-Archibald Tech Co, Ltd. yabhaliswa ngo-2014 kwaye igqibe iminyaka emi-6 yembali. Inkampani yethu yenye yamashishini asekhaya ambalwa agxila kwimveliso yokukhanyisa yezityalo eziphezulu ze-LED. Yingqokelela yophando lwezifundo zokukhanya kwezityalo kunye neemveliso. Itekhnoloji yophando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo zidityanisiwe. Umsebenzi wenkampani "kukuhlakulela iitalente zokukhanyisa izityalo kwaye ube yinkokheli ekukhanyiseni izityalo", kwaye umbono "kukuba ngowokuqala ukubonelela ngenkonzo yokukhanyisa izityalo, ukuze kungabikho zityalo zinzima emhlabeni." Ukusebenzisana njengesiseko, ukwaneliseka kwabaxhamli njengoyena ndoqo, kunye nentsebenziswano kunye nokuphumelela '' ngamaxabiso ethu!
I-AR 6000 ephezulu ye-LED ikhulisa ukuKhanya kweenkqubo ezikhulayo ze-hydroponic zikhokele ukukhanya kwendlu yegreenhouse
I-AR 4000 ephezulu ye-LED ikhula ngokuKhanya kweenkqubo ezikhulayo ze-hydroponic zikhokele ukukhanya kwendlu yegreenhouse
Izibane zeQTY: 72pcs
I-640W i-8 imivalo iyancipha + i-RJ14 PORT
Ilizwe: Swizalend, Khulisa indawo: 1000 sqt
Le yifama ethe nkqo eSwitzerland, imigangatho emi-3 yesitendi, inamagumbi ama-2, Igumbi ngalinye lisebenzisa ii-pcs ezingama-36 ezikhokele ukukhanya kwezibane ezingama-640W, kwaye umndilili we-ppfd we-640W ufikelela kwi-1002 ye-PPFD kwi-intshi ezi-6.
Ukukhula kweproiecti a
Ilizwe: iU.SA, Khulisa indawo: 2000 sqt
Oku kukukhula kwendlu yemfazwe e-USA, kusetyenziswa ii-80pcs 640W kwigumbi elinye. Ukukhanya kokukhanya ngakunye yi-5 * 5ft ene-PPFD efanayo
Izibane zeQTY: 20pcs
I-800W i-10 imivalo iyancipha + i-RJ14 PORT
ICoutry: iUSA, indawo yokukhulisa: 1000 sqt
Olu lukhulo lwangaphakathi olunendawo enkulu ethe nkqo.Ukusebenzisa imivalo engama-800W eyi-10, inokuxhoma phezulu eluphahleni, enceda ukugubungela indawo yokukhula enkulu. I-800W ine-avareji egqwesileyo ngaphezulu kwe-1300ppdd kwi-12inch.
Izibane zeQTY: 96pcs
I-800W i-10 imivalo iyancipha + RJ
ICoutry: Canada, Indawo yokukhulisa: 2400 sqt
Oku kukhula kwarack yangaphakathi enamagumbi ama-2, ii-racks ezi-4 zizonke, iileya ezi-3 zeraki nganye, indawo nganye yokubeka isebenzisa izibane ezingama-24pcs.
Izibane zeQTY: 60pcs
I-640W i-8 imivalo ayinakunqunyulwa
ICoutry: IGuernsey, indawo ekhulayo: 1000 sqt
Le yindawo yokugcina yangaphakathi kwaye ikhulisa iprojekthi yeentente. Sebenzisa i-5000K ye-VEG kwindawo yokugcina izinto, kunye ne-3500K + 660nm yeentyatyambo kunye nezityalo zoomama kwintente ekhulayo.
I-1, ukukhanya kwesityalo se-pearl sokuhambisa ukukhanya kwe-LED ukukhanya kwesityalo, injongo yaso isetyenziselwa ukukhula kwezityalo, imeko efanelekileyo ...
Isampulu yokwenene yokukhanya kwesityalo se-LED ...
Luhlobo olunjani lwendawo ukukhanya kwesityalo se-LED kukulungele kakhulu ukukhula kwezityalo? Ubungakanani bokukhanya kwesityalo se-LED kufanelekile kakhulu ekukhuleni kwezityalo, ...
Uhlobo luni lwendalo ukukhanya kwesityalo se-LED ...
Yeyiphi indlela yokusasaza ubushushu yokukhanya kwesityalo se-LED? Njengazo zonke iimveliso zombane, izibane zezityalo ze-LED ziya kuvelisa ubushushu ngexesha lokusetyenziswa, ...
Yeyiphi indlela yokuhambisa ubushushu kwisicwangciso se-LED ...
Ungabandisa njani ubomi obufanelekileyo bezibane zezityalo ze-LED？ 1. Ukukhanya kwesityalo se-LED. Nokuba ngaba kufakelo lokuqala okanye ukufaka okuphindiweyo ...
Indlela yokwandisa ubomi obusebenzayo bezityalo ze-LED ...
Kutheni ukukhanya okubomvu kusetyenziswa ikakhulu kwizibane zezityalo ze-LED? Kutheni ukukhanya okubomvu kusetyenziswa ikakhulu kwizibane zezityalo ze-LED? : I-ultraviolet emfutshane yokukhanya kwesityalo se-LED inoku ...
Kutheni ukukhanya okubomvu kusetyenziswa ikakhulu kwizibane zezityalo ze-LED?
Umgangatho wokukhanya ulungelelaniswe ngumgaqo ochanekileyo wombane womthombo omtsha wokukhanya kwesibane sokukhula kwesityalo se-LED, kunye neetumato ebusweni ...
Iziphumo zezibane zezibane ze-LED ekukhuleni ...
1. Ukucoceka okuphezulu, imibala eqaqambileyo kunye nesityebi. Ii-LED zangoku ziphantse zagubungela yonke imbonakalo ebonakalayo ngombala ophezulu wokucoceka. Kwaye ufumane oqhelekileyo ...
Zithini izibonelelo zezibane zezibane ze-LED?